Isku shaandheyn iyo tiro kordhin la filayo in lagu sameeyo golaha wasiirada xukuumada Somalia | Salaan Media
Isku shaandheyn iyo tiro kordhin la filayo in lagu sameeyo golaha wasiirada xukuumada Somalia
Mogdisho,28.3.13 (SM) Warar laga helayo ilo wareedyo xog ogaal ah oo ku dhow dowlada Somalia ayaa sheegaya inuu socdo qorshe la damacsan yahay in golaha wasiirada lagu sameeyo isku shaandheyn iyo tiro kordhin, si loogu soo daro wejiyo cusub, iyadoo dib loogu celinayo 18-kii wasiir.
Macluumaadka la helayo ayaa sheegaya in isku shaandheynta la qorsheynayo ay ka dhalatay cadaadis ay dowlada Itoobiya saartay madaxda Soomaalida, si xukuumada loogu soo daro siyaasiyiin ay iyadu gadaal ka riixeyso.
Sidoo kale, beelo kaalin ku leh siyaasada Somalia oo iska dhex waayey golaha wasiirada ee hadda shaqeeya ayaa waxaa la sheegayaa iney iyana cadaadis ba’an ku hayaan madaxda dowlada si isku shaandheyn loo sameeyo, looguna soo daro golaha cusub ee wasiirada.
Itoobiya ayaa door siyaasadeed iyo mid milateri ku leh Somalia, iyadoo dhowaana ciidankeeda kala baxday degmada Xudur oo ay dib ugu laabteen xoogaga Al-shabaab, waxaana la sheegay in talaabadaas ay aheyd mid ay ku cabsi gelineysay dowlada si loo meel mariyo dalabkeeda.
Siyaasiyiinta ay dowlada Itoobiya gadaal ka riixeyso si loogu soo daro golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ah Axmed C/salaan Xaaji Aadan oo xukuumadihii KMG ahaa ee Nuur-cadde iyo Cumar C/rashiid ka ahaa xildhibaan, kana qabtay xilal ay ka mid yihiin raisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga.
Sidoo kale, Waxaa ka mid ah Mustaf Dhuxulow oo isna ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka, xilal kala duwana ka soo qabtay xukuumadihii KMG ahaa ee dalka soo maray, waxaana sidoo kale la hadal hayaa in golaha wasiirada lagu soo darayo Shariif Xasan Shiikh Aadan gudoomiyihii hore ee Baarlamanka oo isagu lagu eedeeyo inuu ahaa siyaasi khilaaf iyo qas ka dhex abuuray dowladihii KMG ahaa.
Sidoo kale, rag ku dhow dhow dowlada Somalia ayaa xaqiijinaya in dowlada Itoobiya ay ka xumaatay isbedelka lagu sameeyey talisyada hogaanka sare ee ciidamada milateriga, markii xilka laga qaaday taliyihii iyo abaanduulihii hore ee ciidanka milateriga, laguna bedelay saraakiil kale.